Rebeqah Waxay Doonaysay Inay Yehowah ka Farxiso | Carruurtaada Wax Bar
Rebeqah Waxay Doonaysay Inay Yehowah ka Farxiso
Naag Yehowah jecel bay ahayd Rebeqah. Ninkeedana Isxaaq baa la oran jiray. Isaga xitaa Yehowah wuu jeclaa. Rebeqah sidee bay Isxaaq u baratay? Sidee bayna u tustay inay Yehowah rabtay inay ka farxiso? Bal aan sii ogaano sheekadeeda.
Isxaaq hooyadiisa iyo aabbihiisa waxay ahaayeen nebi Ibraahim iyo Saarah. Waxayna degganaayeen meel Kancaan la dhaho. Dadka meeshaas degganaana Yehowah ma caabudi jirin. Haddaba Ibraahim wuxuu rabay inuu wiilkiisa guursado naag Yehowah caabudda. Marka Eliiceser oo ahaa nin gurigiisa ka shaqeeya buu u diray meel Haaraan la dhaho siduu wiilkiisa Isxaaq naag uga raadiyo. Ibraahim reerkiisa qaar ka mid ah ayaa meeshaas degganaa.
Rebeqah geeli inay waraabiso diyaar bay u ahayd
Eliiceser iyo adeegayaashii kale oo Ibraahim baa safar aad u dheer galay. Waxay haysteen toban geel oo sida cunto iyo hadiyado. Laakiin Eliiceser naagtuu Isxaaq u dooran lahaa sidee buu ku garan doona? Markay Haaraan Eliiceser iyo adeegayaashii kale gaareen waxay ku nasteen meel ceel ku yaal. Eliiceser wuu ogaa inay mar dhow dadku biyo soo dhaansan doonaan. Yehowah buu u tukaday oo wuxuu yiri: ‘Naagta ad dooratay waxaan ku garanaya markaan weyddiisto biyo aniga iyo geelkaygaba way ina wada waraabin doonta.’
Ceelkii waxaa timid gabadha Rebeqah. Inay aad u quruxsanayd buu Kitaabka inoo sheegaa. Eliiceser biyuu ka codsaday waxayna tiri: ‘Haa waan ku siin doonaa biyo geelkaagana waan u soo dhaamin doona.’ Bal ka feker biyo intee leʼeg bay geelku cabaan? Wax badan! Marka ceelkii in badan inay ku ororoddo bay ahayd siday geela u waraabiso. Siday u dadaalayso sawirka maad ka aragtaa?— Eliiceser aad buu ula yaabay siduu Yehowah salaaddiisii uga jawaabay.
Eliiceser hadiyado badan oo qurux badan buu Rebeqah siiyay. Iyadiina gurigeeday ku soo dhoweysay. Eliiceserna wuxuu reerkeedii u sheegay sababtuu Ibraahim u soo diray. Wuxuuna u sheegay siduu Yehowah baryadiisa uga jawaabay. Rebeqah reerkeedii way ku faraxsanayeen inay Isxaaq guursato.
Rebeqah Eliiceser bay Kancaan u raacday oo Isxaaq bay guursatay
Laakiin maad u maleysaa inay Rebeqah Isxaaq rabtay inay guursato?— Markay reerkeedii weyddiiyeen inay rabtay Kancaan inay aaddo oo Isxaaq guursato waxay tiri: ‘Haa, waan rabaa.’ Waayo Rebeqah way ogeed inuu Yehowah Eliiceser soo diray. Kancaan markay gaareen Isxaaq baa loo guuriyay.
Yehowah Rebeqah wuu barakeeyay waayo waxay sameysay wuxuu Yehowah rabay. Waxayna ka mid noqotay nebi Ciise abtiriskiisii! Yehowah adiga xitaa wuu ku barakeyn doona haddii ad Rebeqah oo kale tahay oo ad isaga ka farxisid.
Bilowgii 12:4, 5; 24:1-58, 67
Yay Rebeqah ahayd?
Ibraahim muxuusan u rabin inuu Isxaaq naag Kancaan ka timid guursado?
Eliiceser sidee buu u ogaaday inay Rebeqah tahay middii Isxaaq loo doortay?
Rebeqah oo kale sidee baan u noqon karnaa?
Wadaag Wadaag Rebeqah Waxay Doonaysay Inay Yehowah ka Farxiso